အတတ်ပညာ China တခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာပိတ်ချော Copmress Cotton Gauze Spuare Pad 100% Absorbent စက်ရုံနှင့် ရောင်းချသူများ |Zhongxing
10 နှစ်ကျော်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ZHONGXING အဖွဲ့သည် Gauze ထုတ်ကုန်စီးရီးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်နေကြသည်။
Medical Gauze Compression --8ply၊12ply est--Folded edge သို့မဟုတ် unfolded threads
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တခါသုံး မြင့်မားသော စုပ်ယူနိုင်သော 100% ချည်သား မြုံသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဖိသိပ်ထားသော ပိတ်ပါးလွှာ သည် သဘာဝ ပျော့ပျောင်းသည်။
Gauze Swabs100% bleached cotton gauze ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။၎င်း၏ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် စုပ်ယူမှုနှင့်အတူ၊ ၎င်းတို့သည် အသေးစားဒဏ်ရာများကို သန့်ရှင်းရန်နှင့် ဖုံးအုပ်ရန်၊ လျှို့ဝှက်ချက်ကို စုပ်ယူရန်နှင့် ဒုတိယအနာကျက်သောဒဏ်ရာများကို ကုသရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ဤသည်မှာ ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်-
1. Non-Sterile သို့မဟုတ် Sterile ထုပ်ပိုးခြင်း။
2. ချည်ကြိုး: 40'၎၊ ၃၂'၎၊ ၂၁'s
3. X-ray ချည်မျှင်ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါဘဲ၊ ခေါက် သို့မဟုတ် ဖြန့်ထားသော အစွန်း
4. Mesh- 20x12၊ 19x15၊ 24x20၊ 26x18၊ 30x20၊ 28x24၊ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
5. အရွယ်အစား- 5cmx5cm(2”x2”),7.5cmx7.5cm(3”x3”) 10cmx10cm(4”x4”) 10cmx20cm(4”x8”) သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။
6. Ply: 4၊ 8၊ 12၊ 16၊ 32 သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
7. အရောင်- အဖြူ၊ အစိမ်း၊ အပြာ...
ပိုးမွှားကင်းစင်သူများအတွက် 1pc/pouch, 3pcs/pouch, 5pcs/pouch, 10pcs/pouch/pouch, blister, paper bag တို့ပါ၀င်ပါသည်။၎င်းတို့ကို ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဆေးဆိုင်စသည်ဖြင့် အမြောက်အမြား ဝယ်ယူလေ့ရှိသည်။အရည်အသွေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများအားလုံးသည် CE၊ ISO13485 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်လာပါသည်။
Gauze Swab, Cotton Roll, Cotton Ball, Face Mask, Medical Sheet, Medical Cap စသည်တို့
100% Cotton ၊ အဆီပြန်ပြီး အရောင်ချွတ်ဆေး
အမျိုးအစားများ တွေ့ရှိနိုင်သော ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ထားသော အစွန်းများ
ချည်ထည်များ 40s၊ 32s၊ 21s
Mesh အရွယ်အစား 12*8,19*9,20*12,19*15,24*20,28*24 သို့မဟုတ် သင့်တောင်းဆိုချက်အရ
အရွယ်အစား 5*5cm(2"*2"), 7.5*7.5cm(3"*3"), 10*10cm(4"*4"), 10x20cm(4"*8") သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
အလွှာ- 4ply၊ 8ply၊ 12ply၊ 16ply သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
ထုပ်ပိုးမှု- စက္ကူထုပ်တစ်ခုလျှင် 50pcs၊ 100pcs၊ 200pcs သို့မဟုတ် poly အိတ် သို့မဟုတ် သင့်တောင်းဆိုချက်အရ ဖြစ်နိုင်သည်
လျှောက်လွှာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း၊ အခြားအနာအဝတ်များ သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်မှု
ယခင်- Clip Cap ဖြင့် တစ်ခါသုံး ဆေးထုပ်များ
နောက်တစ်ခု: တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ ခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Gauze Square Pad
Sterile Meidcal Gauze Pad
Fda ဖြင့် တခါသုံး Mask ၃ လွှာ, တစ်ခါသုံး Half Mask အသက်ရှူကိရိယာ,3Ply တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံး, Mask အလုပ်, Ffp1 တစ်ခါသုံး Mask, မျက်နှာကဲ့သို့ Mask,